Isixhobo sefilitha sokucoca amanzi esifakwe ekhaya siyatshintshwa rhoqo. Ngaba ndingayihlamba kwaye ndiqhubeke nokuyisebenzisa? Ayilunganga le nto! ukhuseleko lokusetyenziswa kwamanzi ngokubanzi, Siyakholelwa ukuba amakhaya amaninzi afake izixhobo zokucoca amanzi. Amanzi empompo ahamba ...
Ngoku iimeko zokuphila zabantu ziya ziba ngcono kwaye zingcono, kwaye baqalisile ukulandela umgangatho wobomi. Nokuba uyatya, uyasela okanye uyabusebenzisa ebomini, kufuneka ube sempilweni, kwaye ukuba kukho imfuneko, uya kusebenzisa oomatshini abathile ukunceda, ukuze ...
Uninzi lwezinto zokucoca amanzi ekhaya, inqanaba lokuqala lokucoca ulwelo licebo lokucoca ulwelo lwePK. Inqanaba lokuqala lokucoca ulwelo alichaphazeli ngqo kuphela umgangatho wamanzi, kodwa lichaphazela inqanaba lesithathu okanye inqanaba lesine lokucoca kunye nobomi ...